Vondrona mpianatra Maleziana miatrika fanadihadiana vokatry ny lahatsoratra tao amin’ny Facebook nanentana ny mpanjaka tsy hitsabaka resaka politika · Global Voices teny Malagasy
Mpianatra enina no efa nampanantsoin'ny polisy
Voadika ny 17 Novambra 2020 6:18 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, English, Español, English
Mpikambana miisa enina avy ao amin'ny Fikambanan'ny Tanora Vaovao Universiti Malaya (UMANY) niaraka tamin'ny mpisolovava manokana misahana ny zon'olombelona tany amin'ny biraon'ny polisy tao an-toerana. Sary avy amin'ny pejy Facebook-n'i Yan Ke Wong.
Vondronà mpianatra iray any Malezia no mandalo famotorana ho manao fampisaraham-bazana taorian'ny famoahana fanambarana tao amin'ny Facebook nanentana ny mpanjaka tsy hiditra an-tsehatra amin'ny raharaham-pirenena.
Tamin'ny 30 Oktobra, namoaka fanambarana mitondra ny lohateny hoe “Tsy tokony hitsabaka amin'ny raharaham-pirenena ny Yang di-Pertuan Agong” ny Fikambanan'ny Tanora Vaovao Universiti Malaya (UMANY). Ilazana ny Mpanjaka Maleziana ny Yang di-Pertuan Agong na YPDA. Eo ambany lalàmpanorenana fitondram-panjaka ao Malezia, marika mampiray ny firenena ny YPDA ary heverina fa tsy manao politika na miditra antoko politika. Namoaka izany fanambarana izany ny UMANY ho setrin'ny tatitra momba ny fandavana nataon'ny mpanjaka momba ny tolokevitry ny praiminisitra tamin'ny fanambarana ny fepetra fahamehana mba hamahana ny fitomboan'ny tranganà COVID-19. Nangataka tamin'ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta ihany koa ny mpanjaka hanohana ny volavolan-dalàna momba ny tetibolam-panjakana.
Nisarika ny sain'ny maro ny fanambaran'ny UMANY sady nahazo fanakianana betsaka avy amin'ireo mpanohana ny YDPA izay nanery ny vondrona mpianatra hamafa ilay lahatsoratra. Nilaza ny Universiti Malaya (UM) fa hanao famotorana ny UMANY izy ireo momba io fanambaràna io. Nilaza ny polisy fa manao famotopotorana ny UMANY izy ireo noho ny fandikana ny Lalànan'ny Fampisaraham-bazana tamin'ny taona 1948 sy ny Lalànan'ny Serasera sy Fampitam-baovao Marolafy tamin'ny 1998. Mety ho voasazy handoa onitra sy higadra hatramin'ny telo taona ireo meloka amin'ny fampisaraham-bazana.
Ny 9 Novambra, mpikambana UMANY miisa enina no nampanantsoin'ny polisy hanaovana famotorana. Nanao bemidina tao amin'ny tranon'ny filohan'ny UMANY ihany koa ny mpitandro filaminana ary nalainy ny solosaina sy ny telefaonina an'ilay mpitarika ny mpianatra .
Namerina namoaka ity fanambarana ity ny UMANY tamin'ny 3 Novambra satria nisy nanova tao amin'ny tambajotra sosialy ilay lahatsoratra voalohany ary nanjary lasa nitaky ny fandravana ny fitondram-panjaka.
Nitarainany ny tsindry aloka amin'ny aterineto nahazo ireo mpikambana ao aminy nataon'ireo mpisera sasany izany izay tsy miombon-kevitra tamin'izy ireo:
Voakasik'izany ara-batana sy ara-tsaina ny mpikambana sasany satria naseho ho hitan'ny besinimaro ary voasoketa ny kaonty Facebook-n'izy ireo manokana. Niharan'ny herisetra ihany koa ny mpikambana na ny maintimolalin'ny vondrona tamin'ny fiantsoana azy ireo na ny ray aman-dreniny, nilaza ny hitady ny tranony, ny toeram-piasany ary nandrahona ny hamono azy ireo mihitsy aza. Ankoatra izany, nahazo fandrahonana ara-nofo ihany koa ireo mpikambana vehivavy ato aminay sady mahazo fiteny maloto sy teny ratsy.
Nisy fanangonan-tsonia natombok'ireo vondrona mpianatra marobe naneho ny fanohanany ny UMANY.
Mpianatra lalàna manodidina ny 261 manerana an'i Malezia no nanao sonia fanambarana miaro ny UMANY. Nampatsiahy ny UM ihany koa ny fanambaràna mba hihazona ny fahalalahana akademika:
Amin'ny maha andrim-panjakana vatsian'ny mpandoa hetra vola azy dia manana adidy amin'ny fiarahamonina ny UM amin'ny fihazonana sy ny fanamorana ny fikatsahan'ny fiarahamonina ny fahamarinana. Midika famelana sy fiarovana ny fahalalahana ho an'ny mpianatra haneho ny fitsikerany momba ny olana lehibe araka izay azo atao izany.
Nanome fanazavana araka ny lalàna momba ilay resabe ny Mpandala ny Lalàna ao amin'ny Oniversite Malaya ary nanamafy ny zon'ny UMANY haneho ny heviny manoloana ity olana ity:
Mety ho nampiady hevitra ny lahatsoratry ny UMANY, kanefa mampiseho ny famakiana feno ny fanambarana fa maneho ny heviny momba ny andraikitra sy ny anjara asan'ny YDPA amin'ny demokrasia parlemantera sy ny lalàm-panorenana fitondram-fanjaka araka ny famakian'izy ireo ny lalàmpanorenana izy ireo. Noho izany, mihevitra izahay fa maneho ny zon'ny fahalalaham-pitenenana sy ny fahalalahana akademika ny fijoroan'izy ireo, izay toa nampiady hevitra toa izany.
Nanamafy ny Foiben'ny Asa Fanaovan-gazety tsy miankina fa “ampahany lehibe amin'ny traikefa hananana amin'ny fianarana ambony ny fahalalahana maneho hevitra.” Hoy ihany koa izy ireo:
Tsy afaka miroborobo ao anatin'ny tontolon'ny sivana sy ny famerana ny fitenenana ary ny fanehoan-kevitra tsy mifandanja ny fandalinana akademika sy ny fampiroboroboana ny zon'olombelona.
Nanamafy ny Tambajotra Nasionalin'ny Zon'olombelona (JHAM) fa tsy nandika lalàna ny UMANY tamin'ny famoahana fanambaràna momba ny mpanjaka:
… Ny zava-misy dia niady hevitra tamin'ny fomba voalanjalanja momba ny anjara asan'ny YDPA ny UMANY fa tsy nisy fanaratsiana na fanamarihana manevateva natao tamin'ny mpanjaka. Noantitranterin'izy ireo ny lanjan'ny demokrasia, ny maha laharam-pahamehana ny fiandrianam-bahoaka, ary nambarany fa tokony arovana sy kolokoloina ho ao amin'ny lalampanorenana fitondram-panjaka ny rafitra fanaraha-maso sy ny fifandanjana.
Shina 6 ora izay